Notablist: aingam-panahy ho an'ny tsenan'ny mpivarotra mailaka | Martech Zone
Alakamisy Janoary 8, 2015 Alakamisy 12, 2015 Douglas Karr
Notablist mivarotra ny tenan'izy ireo ho toy ny Search Engine mailaka mailaka mailaka, izay nandrakitra an-tsoratra mailaka fikarohana an-tsoratra maherin'ny 5 tapitrisa manerana ny 400,000 Publishers. Ny fitaovana toa itony dia mahafinaritra ho an'ny mpamorona maniry hahazo aingam-panahy avy amin'ireo marika manan-danja na mpivarotra nomerika te-hahita rehefa mandefa ny mpifaninana aminy ary karazan-gazety sy fifanarahana inona no ampitaina.
Raha orinasa tsy manana loharanom-pahalalana hitsapana ianao, dia mety hanampy indrindra ireo fitaovana ireo satria mampihatra ezaka betsaka amin'ny famoahana ny mailaka azony ireo mpanonta be!
Notablist dia manana endrika sy tombontsoa vitsivitsy:
Fikarohana sy sivana mandroso - Karohy amin'ny lohahevitra, anaran'ny mpandefa, adiresy mailaka mpandefa, soratra amin'ny vatana na koa URL. Sivana amin'ny daty, laharana Alexa ary loko mihitsy aza.
Torohevitra Momba ny Teny Keyword - Mizaha fironana miaraka amin'ny mpijery ny fizotry ny fotoana ifaneraserantsika, avy eo zahao ny fandaharam-potoana manan-danja sy ny daty manokana hahitana maso akaiky kokoa.
Digest isan'andro - Mitsitsia fotoana ary aza adino ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fandavahana mailaka isan'andro fanentanana vaovao ho an'ny marika tianao indrindra.
Fanavaozana ny realtime - Misy ny fampielezan-kevitra amin'ny fikarohana ny ora nalefa, ary voatahiry maharitra.
24 / 7 Support - Eto izy ireo rehefa ilainao izy ireo, na ho an'ny fanontaniana, tatitra momba ny bibikely na sosokevitra momba ny vokatra io.
Azonao atao aza ny mahita ny olana taloha!
Notablist koa nanampy Pro, ambaratonga serivisy mihatsara izay manampy hoe:
Valin'ny fikarohana amin'ny fotoana tena izy - Tonga ny fampielezan-kevitra avy hatrany, dia azo karohina. Ankoatr'izay, ny bokotra 'Fanavaozana mivantana' ao amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana dia mamela anao hanara-maso tsy tapaka ireo fikarohana ad-hoc ho an'ireo zavatra vao tonga.
Dashboard mivantana - Ny fanaovana marindrano ny karoka ankafizinao dia fomba tsara hijanonana ho ambony indrindra, saingy tsy ho tsara kokoa ve raha mahita azy rehetra amin'ny toerana iray ianao? Ny dashboard mivantana dia manao izany fotsiny: manambatra ny valiny ho an'ny tsoratadidy rehetra ho lasa zotram-potoana tokana izy izay manavao hatrany hatrany rehefa tonga ireo entana vaovao. Hevero ho toy ny feed Twitter ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka izay mahaliana anao.
Fanairana mailaka amin'ny fotoana tena izy - Misy zavatra tsy afaka miandry. Ny tena zava-dehibe dia misy zavatra tsy azo hadino. Amin'ny fanairana amin'ny fotoana tena izy dia afaka mahazo mailaka eo noho eo ianao rehefa tonga ny fampielezan-kevitra vaovao ho an'ireo tsoratadidy.
Fitaovana fanaovana sary - Ny valin'ny fikarohana dia efa misy tabilao sparkline mampiseho ny fironana 90 andro amin'ny teny fikarohana. Fa matetika dia zava-dehibe ny mampitaha ireo teny maro hahitana izay mitombo sy izay mirongatra, na koa iza amin'izy ireo no be mpitia indrindra. Amin'ny mpitazana dia azonao atao izany ary mahita ny valiny ho toy ny tabilao na pie.
Tags: fikarohana mailaka mifaninanafikarohana ifaninananamailakafomba fanao tsara amin'ny mailakatahiry mailakafamolavolana mailakaohatra amin'ny mailakamotera fikarohana mailakafitsapana mailakaNewsletterfamolavolana newsletteraingam-panahy amin'ny newsletternotablist